B&O dia mandefa headphones E8 miaraka amin'ny AirPods eo amin'ny sehatra | Vaovao IPhone
B&O dia mandefa headphones E8 miaraka amin'ny AirPods amin'ny fijerena azy
Luis Padilla | | Fitaovana IPhone, About us
Ny headphone tsy misy tariby tokoa dia mahazo vahana ao anatin'ny marika malaza indrindra amin'ity segondra ity, ary ny B&O dia tsy te ho tavela amin'ity firoboroboana firoboroboana ity miaraka amin'ny headphone toy ny Beoplay E8 izay mitazona ny mampiavaka ny marika: fahatsorana, fomba ary kalitao faran'izay betsaka.
Ireo headphones tsy misy tariby ireo dia manambatra ny sasany amin'ireo famaritana ara-teknika mandroso indrindra eny an-tsena, toy ny fahaizana mifehy ny playback amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mikasika avy amin'ny headset mihitsy, miaraka amin'ireo fiasa hafa izay mametraka azy ireo amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ny ambiny, toy ny fonosan'ny aliminioma na ny boaty fanaovana charger vita amin'ny tena hoditra.
Beoplay E8 no mpiara-miasa tonga lafatra ho an'izay tsy te-hanaiky lembenana amin'ny feo sy ny famolavolana ho an'ny tena fahalalahana mandeha amin'ny tariby. Natao hifanaraka amin'ny voajanahary ao anaty sofina izy io, manao fanambarana amin'ny haitao somary ambany sy kanto ary mamoaka feo manankarena sy marina ao anaty fehezany ”, hoy ny talen'ny B&O PLAY John Mollanger.
Fanoherana ny vovoka sy ny famafazana, fanaraha-maso mikasika ny playback, famaliana antso, ary «Mode Transparency» hihainoana ny zava-drehetra manodidina anao azo ampifanarahana amin'ny ambaratonga 4 mahery, baikon'ny feo, Bluetooth 4.2, ary fampiharana ho an'ny Android, iOS ary watchOS. Ireo famaritana rehetra ireo dia ampiana amin'ny akora premium sy kalitao tsara feo izay nampiavaka ny marika efa ho zato taona.
Ny tratra bateria dia manome fiampangana roa hatramin'ny farany, ary ny fiampangana tsirairay dia manome anao hatramin'ny adiny efatra amin'ny fotoana filalaovana tsy tapaka. Ny fametrahana ny headset amin'ilay tranga dia ho faty tampoka ary hanombohana ny famandrihana ka vonona izy hampiasainao manaraka. Ireo Beoplay E8 dia ho hita manomboka amin'ny 12 Oktobra amin'ny loko roa, fasika mainty sy arina, ho an'ny vidiny € 299. Ny headset tsirairay dia azo oharina tsy miankina amin'ny € 129 sy ny tranga ho an'ny € 99. Manana ny fampahalalana rehetra ao amin'ny pejy ofisialy B&O ianao Ity rohy ity. Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany ary amin'ny lazan'ny B&O dia vidiny tena mahaliana tokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » B&O dia mandefa headphones E8 miaraka amin'ny AirPods amin'ny fijerena azy
Miaraka amin'ireo airpods eo amin'ny sain'ny mpitsidika? Amin'izany vidiny izany dia azoko atao ny mividy 2. Tsy miatrika ny airpods akory izy ireo amin'ny androm-piainany. Ary maninona no tadiavinao ny peratra aluminiana ho antsipirihany? Ahoana no fomba hanampiany azy? Ary ny raharaha vita amin'ny hoditra? Na izany na tsy izany, natao ho an'ny zanak'olo-mpiray tam-po izay mandany ny volany. Airpods dia efa lafo amin'ny tenany, fa mahasalama ihany. Saingy avo roa heny ny vidiny ary azo antoka fa tsy tsikaritry ny sofin'ny olombelona ny fahasamihafana. Angamba metatra nomerika sasany, fa tsy isika.
Fa eny, fantatro fa izy ireo dia efa azo vita amin'ny volamena matevina ary amidy amin'ny € 5M ary hisy olona adala hividy azy ary hilaza fa tsara kokoa ny kalitaony satria vita amin'ny fitaovana tsara kokoa.
Tsy mpankafy paoma aho, ary tsy manana airpods, nanandrana azy ireo tamin'ny namako fotsiny aho, ary ny fahatsapana dia nitovy tamin'ny fotoana nanandramako iphone 2g voalohany. Majika.
Google dia mampihena ny vidin'ny sarimihetsika 4k ao amin'ny katalaoginy ihany koa
Ahoana ny fomba hampiasana ny asan'ny True Tone an'ny iPhone 8 vaovao amin'ny iOS 11